हिंसात्मक आन्दोलनलाई छड्के हानेर - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
हिंसात्मक आन्दोलनलाई छड्के हानेर
भाद्र १३, २०७५
देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा नफसेको भए पवित्रा खड्का नेपाली रंगमञ्चकी कलाकार हुने थिइन् कि थिइनन् ? यसै भन्न सकिँदैन । हिंसात्मक द्वन्द्वको त्यो बेला माओवादीहरू स्कुल, कलेज जाने विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गर्थे । उनीहरूलाई युद्धकला सिकाउँथे । बम ब्लास्ट गर्न पठाउँथे । त्यति बेला एक प्रकारको आतंक फैलिएको थियो देशमा । आफ्नो जीवन रक्षाका लागि युवा–युवतीहरू खाडीका देशहरूतिर भासिन्थे ।
उनीहरूका अभिभावकहरू छोरा–छोरीको कल्याणका लागि ऋण धनको जुगाड गर्थे । करिब पाँच वर्षसम्म डर, त्रास र भयले गाउँबस्ती कतै छाडेन, कसैलाई छाडेन । भन्न त सहर–बजारतिरका ठूला–बडा मानिसहरू नेपाली सेनासँग माओवादीको लडाईं बराबरीको थिएन भन्थे । त्यो कुरा सत्य पनि थियो । आँखाले झट्ट हेर्दा कौशलपूर्ण हिसाबले संगठित सेनाका अगाडि माओवादी सेनाको हैसियत देखिँदैनथ्यो । माओवादीमा आत्मबल थियो । मनमा सम्बल थियो । जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।
त्यही बेला जनसेनामा भर्ती खुलेको थियो र नेताहरू हुर्किएका, जोदाहा र उद्देश्यमा समर्पित हुने युवा–युवतीको खोजीमा थिए । त्यतिबेला स्थानीय स्कुलमा आठौं कक्षामा पढ्ने पवित्रा खड्का माओवादी नेताहरूको नजरमा चढेकी थिइन । शारीरिक सुगठन र अन्य सबै हिसाबले उनी गुरिल्ला बन्न योग्य थिइन् । माओवादीहरूको अपहरणमा पर्ने आशंका पवित्रालाई पहिलेदेखि नै थियो । माओवादीहरू हिंसात्मक आन्दोलनको निष्कर्षतर्फ बढ्दै थिए । उनीहरूको आँकलन थियो : पवित्राजस्ता सय–डेढ सय जना तन्नेरी लडाकु फेला परे भने काठमाडौंको सत्ता उनीहरूको झन्–झन् नजिक हुने थियो ।
पवित्रालाई ज्यान जोगाउन कठिन भैसकेको थियो । घरका मानिस कहिले उनलाई परालको कुन्यूमा लुकाउँथे, कहिले घाँसको भारीले छोपछाप पार्थे । यहींनिरबाट छड्के हानिन् पवित्राले । घर–परिवारको सहमतिमा उनी रामेछापको आफ्नो गाउँ कुदौरीबाट काठमाडौं सहरतिर लागिन् । उनको लक्ष्य थियो– काठमाडौं । पवित्राको छड्के हनाइले स्थानीय माओवादी अलमलमा परेका थिए । उनले कुन बेला, कुन सडकामा मन्थली छाडिन्, कसैले थाहा पाएनन् । पवित्राका लागि यो अनुभव पहिलो थियो । यसले उनलाई लडाकु त लडाकु नै बनायो, तर रंगमञ्चको लडाकु । शरीर र व्यक्तित्वका हिसाबले उनलाई लडाकु र नायिका दुवै भूमिका खुल्थ्यो । उनको त्यो अवतार अहिले पनि देखिन्छ । पवित्रा आफ्ना चम्किला आँखाले भविष्य सोचिरहेकी देखिन्छिन् । उनको व्यक्तित्व गहिरो संवेदनाको सागरमा डुबेको पाइन्छ । जीवनको कुन चरणमा पुगेपछि उनमा सन्तोष आउने हो वा होइन ? त्यो नै निश्चित देखिन्न ।
पवित्राको अतीत अलिकति पनि सुखद छैन । अहिलेको समयमा पनि मानिसहरू अठारौं शताब्दीको चिन्तामा भुटभुटिएर बसेका छन । बाहिर अन्य देशका मानिसहरूको आधारभूत खानामा जीवनका लागि आवश्यक सबै तत्व समावेश गरिएको हुन्छ, तर विदेशी वा स्वदेशी पर्यटकले खोजेको वा चाहेको जस्तो खाना हामी दिन सक्दैनौं । पवित्राको पिताको निधन हुँदा उनी आमाको पेटभित्रै थिइन् । उनका पिता आँपको रूखमा चढेका थिए आँप टिप्न । त्यही रूखको उचाइबाट खसे उनी ।
काठमाडौंमा पवित्राले प्लस टुको पढाइ सकिन् । नृत्यमा उनको ठूलो रुचि थियो । उनी वीरेन्द्र हमालको थिएटरमा अभिनय र नृत्य सिक्न जान्थिन् । यसबीच उनमा रंगमञ्चको चस्का पस्यो । सडक नाटकमा अभिनय गर्न थालिन् उनी । त्यति नै बेला सारंगा सिनेमामा पनि अभिनय गरिन् । सिनेमा त चलेन, तर उनले अभिनयका लागि चाहिने धेरै कुरा सिकिन् ।
शिल्पी थिएटरले कलाकारहरूको खोजी गरेपछि पवित्रा पनि त्यहाँ सामेल भइन् । अब उनको अभिनय यात्रा संगठित भयो । शिल्पीमा रामबाबुबाट उनले धेरै कुरा सिकिन् । त्यहाँसम्म उनले सत्यमोहन जोशीको ‘मजिपा लाखे’ र कुमार नगरकोटीको ‘कोमा’ मा अभिनय गरिन । यी दुवै नाटक हिट भए । कोमा २०५९ को हिट थियो । अहिलेसम्म पवित्राले १५ वटा नाटकमा अभिनय गरेकी छिन । दीक्षान्त, ययाति, शर्मिष्ठा, तातु तिनै मध्येका हुन् । एउटा मान्यता छ पवित्राको । आफैंले पेसागत वा व्यवसायगत केही काम गर्न लागेको छ भने थाक्न पाइँदैन, किनभने नाटकका कलाकार भूमिकासँग थाके भने त त्यो राम्रो हुँदैन ।
थिएटरको होस्टलमा बसेपछि सिर्जनात्मक फाँट र आफन्तहरूबीच पनि बन्देज फिल गर्नुपरेको छैन पवित्राले । उनले पढेर–लेखेर समय बिताउने गरेकी छिन् । शिल्पीमा आगामी बुधबार महाकवि देवकोटाको मुनामदन प्रदर्शित हुँदैछ । त्यसपछि बांगलादेशमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेको नौगेडीको काम हुँदैछ ।
पवित्रा ती सबै महत्वपूर्ण कुराप्रति सचेत छिन्, जोसँग उनी जोडिएकी छिन् । हरेक चरित्रमा राम्रो अभिनय पनि गर्नुपर्ने र हरेक अभिनयलाई सौन्दर्यको खास्टो पनि ओढाउनुपर्ने । जीवनमा पवित्राले प्रेम पनि गरिसकेकी थिइन् एकचोटी । त्यो असफल भयो । अब उनी अभिनयमा सफल हुने अठोटमा छिन । प्रेमको त के कुरा भो र ? त्यसले कतिबेला कसरी र कहाँ छुन्छ, के थाहा ?
प्रकाशित :भाद्र १३, २०७५
नायक सौगात मल्लसंग रमाए वालवालिकाहरु
अमर रहुन् विश्वेश्वर भाद्र २८, २०७६
‘डाउन–टाउन’ जोरपाटी भाद्र २६, २०७६
सहरको नाम टीकापुर भाद्र १८, २०७६
रंगमण्डल–४ भाद्र ११, २०७६
रंगमण्डल–२ भाद्र ३, २०७६
रंगमण्डल–एक श्रावण २५, २०७६
वानादेखि बानथाइसम्म श्रावण १४, २०७६
भीमबहादुर दाइ : एक शब्दचित्र श्रावण १, २०७६
गलामा गलबन्दी असार २६, २०७६
सहरमा मनसुन पसेपछि असार १९, २०७६